कांग्रेस महामन्त्रीसँग कुराकानी
'आजसम्म प्रश्न गरें, समस्या देखाएँ; अब प्रश्नभन्दा जवाफ, समस्याभन्दा समाधान दिने गरी काम गर्छु'
काठमाडाैं | पुस ९, २०७८
कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाको निवास रातोपुलमा शुक्रवार बिहान देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका कांग्रेस नेता/कार्यकर्ताको भीड थियो ।
डेमोक्रेटिक चिकित्सक संघलगायत संगठित तप्का पनि गगनलाई बधाई दिन आइपुगेको थियो । त्यही बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट गगनलाई छलफलका लागि बोलावट भयो ।
महाधिवेशनपछिको व्यस्तताबीच लोकान्तरसँग छोटो कुराकानी गर्न गगन राजी भए ।
कांग्रेस महाधिवेशनको समीक्षा र महामन्त्रीका रूपमा भावी योजनाबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गगन थापासँग कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन कांग्रेसवृत्तमा मात्र नभई राजनीतिमा ज्यादा चासो नराख्ने सर्वसाधारणमाझ पनि चर्चा र रुचिको विषय बन्यो । कांग्रेस महाधिवेशनले कांग्रेस बाहिरको तप्कालाई पनि किन आकर्षण गर्‍यो जस्तो लाग्छ ?
नेपाली कांग्रेस सँगसँगै अन्य दल (खासगरी एमाले)को महाधिवेशन भयो । त्यो महाधिवेशनभित्र नेतृत्वले एकदमै सीमित प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । त्यो पार्टीभित्र संस्थापन पक्षसँग भिन्न मत राख्ने नेतृत्वमा आउनै नसकेको परिवेश बनेको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशनमा पार्टीभित्र निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व चयन भयो । त्यसले अरू पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा नभएपनि कांग्रेसमा भयो भनेर सुखद् अनुभूति भयो ।
कुनै पनि दलमा आवद्ध नभएको मानिसलाई कांग्रेसको अधिवेशनले आकर्षित गर्न सक्यो । कता–कता मलाई पनि पार्टीको महामन्त्रीमा पुग्दै गर्दा शुभेच्छा प्रकट गर्ने, बधाई दिने पंक्ति हेर्दै गर्दा देख्छु, ऊ पार्टीको कार्यकर्ता होइन । मलाई प्राप्त भएका एक दुईवटा बधाई सन्देशमा बल्ल हाम्रो पुस्ताले हाम्रो भनेर आइडेन्टीफाइ गर्न सक्ने पुस्तालाई पार्टी पंक्तिमा देख्यौं, भनेर लेख्नुभएको छ ।
कसैले बल्ल पार्टीको नेताहरु आफ्नो जस्तो लाग्यो भनेर लेख्नुभएको छ । त्यो हामीहरुलाई आफूहरु मध्येकै भन्ठानेको । अहिलेसम्म पार्टीको कर्नरमा बसेर आलोचना गरिरहेको र नेतालाई प्रश्न गरेको देखेकोमा हामी अहिले नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा बाहिर बस्ने साथीले पनि आफैँले जितेको जस्तो महसुश गरेको, प्रतिक्रिया दिएको मैले पाएँ ।
कांग्रेस रुपान्तरणको एजेण्डा र नारासहित प्यानल बनाएर जानुभयो । अधिकांश पुरानै अनुहार आए । अब रुपान्तरणको एजेण्डा के हुन्छ ?
यो महाधिवेशनबाट प्रस्ट के देखियो भने पार्टी सभापतिजीको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको जबरजस्त समर्थन रह्यो । उहाँ निर्वाचित हुने कुरामा मात्र होइन, उहाँसँग जोडिएर चुनाव लडेका बहुसंख्यक साथीहरू निर्वाचित भएर आउँदा यसले के कुरा देखायो भने पार्टीको अधिवेशनले उहाँलाई काम गर्ने मौका दियो ।
सँगसँगै पार्टीको महाधिवेशनले हामीहरू जस्तो सीमित संख्या भएपनि पार्टीमा फरक ढंगले विषय र मुद्दामा काम गरेका साथीहरूलाई पनि काम गर्ने मौका दिएको छ । त्यसैले परिणामको हिसाबले केही कुराको निरन्तरता छ, केही कुरामा रुपान्तरण र परिवर्तनका लागि काम गर्ने स्पेस दिएको छ । यहाँसम्मको परिणाम मैले सोचेजस्तो पनि भएन, सभापतिले सोचेजस्तो पनि भएन । यसरी त कसैले पनि सोचेको थिएन होला ।
हामीहरूको स्वार्थ सभापतिजीले बुझिदिनुपर्‍यो । हामीहरूको स्वार्थ के हो भने हामी पार्टीलाई बदल्न चाहन्छौं । पार्टीलाई सुदृढ र शुद्ध बनाउन चाहन्छौं । निर्वाचन जित्न सक्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं । लोकप्रिय पार्टी बनाउन चाहन्छौं । त्यो लोकप्रिय पार्टीले निर्वाचन जित्दै गर्दा त्यसको सबभन्दा ठूलो श्रेय त व्यक्तिगत रूपमा पनि सभापतिजीले पाउनुहुन्छ ।
या निरन्तरता, या परिवर्तन होला भनेर सोचिएकोमा मिश्रित परिणाम आएको छ । अब हामी कसरी सम्हालिएर जान सक्छौं, सभापतिजीले यो म्यान्डेटलाई कसरी लिनुहुन्छ, हेर्नुपर्छ । अहिले सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो सभापतिजीको यति प्रतिशत वर्चश्व भनेर हेर्ने हो भने मलाई आएको मत के त ? अरू साथीलाई दिएको मत के हो त ?
एउटै व्यक्ति दुई वटाको पक्षमा देखिन्छ, केही कुरामा सभापतिजीलाई समर्थन गरेको छ, सँगसँगै बदलाव खोजेको छ । यो सन्देशलाई सभापतिजीले पनि बुझ्नुपर्छ, हामीले पनि बुझ्नुपर्छ । म निर्वाचित भएको ठीक, सभापति निर्वाचित हुँदा साथीहरूले विवेक पुर्‍याउनुभएन भनेर भनें भने त गलत भयो । सन्देशलाई सभापतिजी र हामीले पनि राम्ररी पकड्न सक्यौं भने कांग्रेसमा एउटा ठूलो बदलावका लागि आधार बनेको छ ।
कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि आम सर्वसाधारणलाई लागेको एउटा जिज्ञासा छ– अब गगन थापाहरू शेरबहादुर देउवाको लयमा हिँड्लान् कि आफ्नो लयमा हिँडाउलान् ?
यस्तो छ, यहाँनेर जीतहारको विषय बनाएर को कसको बाटोमा हिँड्ने भन्ने सोचबाट लागियो भने दुर्घटना हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने अघि मैले भनेको जस्तो महाधिवेशनबाट मतदाताले आफ्नो चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसको मर्मलाई सभापतिजीले बुझ्नु भयो र हामीले पनि बुझ्यौं भने नयाँ बाटोमा पुग्छौं । नयाँ बाटो खोज्ने हो । हामीहरूले के भनिरहेका छौं भने विगतमा स्वार्थ बाझियो ।
त्यसो गर्दा उहाँको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा यी केटाहरूको स्वार्थ भनेकै मेरो स्वार्थ हो भनेर बुझिदिनुभयो भने त समस्या होला जस्तो लाग्दैन । को कसको बाटोमा हिँड्ने भन्नै परेन, प्रतिस्पर्धा गर्नै परेन, हामी नयाँ बाटोमा हिँड्न सक्छौं ।
महामन्त्री निर्वाचित भएपछिको संक्षिप्त सम्बोधनमा विश्वप्रकाश शर्माले गगनसँग हल बाँधिएर काम गर्ने भन्नुभएको थियो । एउटै हलमा रहेका दुईबीच कुरो मिलेन भने त हलो नै भाँचिन्छ । विश्वप्रकाशसँग तपाईंको सहकार्य कस्तो रहला ?
मलाई के लाग्छ भने हामी दुवैजना इक्विएल्ली के कुरामा सचेत छौं भने पार्टीका साथीहरूले बाँध भत्काएर हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री वा सभापति बन्छु भन्ने मिसन बनाएर काम गर्दै गर्दिनँ । म यसमा क्लियर छु । म आजको दिनमा निस्काम कर्ममा विश्वास गर्ने भने जस्तै हो । महामन्त्री छु, महामन्त्रीको काम गर्छु । मसँग गरिएका अपेक्षा पूरा गर्न शतप्रतिशत प्रयास गर्छु । इमान्दारितापूर्वक त्यो काम गरिरहँदा जहाँ पुगिन्छ, पुगिन्छ ।
पार्टीबाहिर पनि एउटा ठूलो पंक्ति छ, विश्वास भन्दिनँ हामीबाट आशा गरेको छ । त्यसैले एक अर्काको ताकत बन्यौं र एक अर्काको परिपूरण गर्‍यौं भने एकअर्कालाई बल पुर्‍याउँदै शक्ति निर्माण गरेर, जसले हामीहरूलाई विश्वास गरेका छन्, उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर पार्टीबाहिरको आशालाई भरोसामा बदल्न सक्यौं भने हामी दुवै सफल हुन्छौं । एकले अर्कोलाई आफूतिर तान्न खोज्यौं भने दुवै असफल हुन्छौं ।
यो अहिलेको चरणमा, यो 'टेन इयर'मा विश्वप्रकाश र म कि हामी दुवै सफल हुन्छौं, कि दुवै असफल । यो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ मैले पनि बुझ्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, हामी दुवैले यो कुरा बुझेका छौं । हामी त्यो परिवेशमा आयौं, कहिले काहिँ यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ, एउटा सफल र अर्को असफल हुने अवस्था रहँदैन । त्यो संवेदनशीलतालाई बुझेकाले त्यो अवस्था आउन दिँदैनौ, आउँदैन ।
महामन्त्रीमा गगन–विश्वप्रकाशको जीतले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा तात्विक फरक के पार्छ ?
महामन्त्री आफैँमा विधानले निश्चित अधिकार र जिम्मेवारी दिएको पद हो । त्यो भएकाले पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउने, कांग्रेसलाई त्यसको आउटलूक मात्र होइन, काम गर्ने तरिका, सोच्ने तरिका र पार्टीलाई आधुनिकीकरण र आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण गर्ने, वर्षौंदेखि ती रहेका मुद्दाहरू छन, व्यवहारमा र सार्थक रूपमा लागू गराउँछौँ । महामन्त्रीभन्दा अन्यत्र भएको भए इच्छा हुन्थ्यो, हाम्रो प्रयत्‍नले मात्र नहुन सक्थ्यो, एउटा त्यो हो ।
अर्को राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस अलि बढी देखिने, बुझिने, सुनिने होस् र अलिकति बढी प्रोएक्टिभ होस् । अनेकन विषय र मुद्दामा आफूले गरेको कामको जस लिन नसक्ने, नगरेको कामको अपजस लिनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा प्रतिक्रियात्मक जुन भएको थियो, त्यो कुरालाई बाहिर निकाल्न सक्छौं जस्तो लागेको छ ।
म र विश्वप्रकाश एक अर्काको ताकत बन्यौं र एकअर्काको परिपूरण गर्‍यौं भने एकअर्कालाई बल पुर्‍याउँदै शक्ति निर्माण गरेर, जसले हामीहरूलाई विश्वास गरेका छन्, उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर पार्टीबाहिरको आशालाई भरोसामा बदल्न सक्यौं भने हामी दुवै सफल हुन्छौं । एकले अर्कोलाई आफूतिर तान्न खोज्यौं भने दुवै असफल हुन्छौं ।
तेस्रो कुराचाहिँ २०६० साल आसपासमा राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको लिडरशीप रोल थियो । कांग्रेसले जो सोच्यो सिंगो देशले पनि त्यही सोच्यो । कांग्रेसले जे सोच्यो देशलाई त्यही डिरेक्सनमा लिएर गयो । हामी अहिले सरकारमा छौं, तर हामीले जे सोच्छौं देशले सोचेको जस्तो बनाउन सकिएको छैन । हामीहरूको उपस्थितिले पार्टीलाई त्यो दिशामा लिएर जान सक्छौं भन्ने हो ।
नेपाली कांग्रेस २०६० देखि २०६३ सालको आन्दोलनको स्पिरिट हो । हामीहरू त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले विगत केही वर्ष संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको पनि भन्ने, तर हृदयबाट त्यसको स्वामित्व लिने कुरामा हिच्किचाउने । कतिपय ठाउँमा गल्ती कमजोरी भए कि भनेर पछुतोको मनोविज्ञानबाट ग्रस्त भएको थियो । त्यसबाट बाहिर निकाल्छौं हामी ।
कांग्रेसले प्रोएक्टिभली अब यो हामीले ल्याएको एजेण्डा हो, हामीले सम्हाल्छौं भनेर बलियो, सुदृढ कांग्रेस बनाएर देशलाई अतिवादमा फस्न नदिने बनाउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
गगन थापाको परिचय सडकदेखि सदनसम्म सशक्त बोल्ने नेताको रूपमा छ । २०७४ सालपछि कांग्रेस सदनमा अत्यन्त निरीह भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार प्रश्न गरेको देखियो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा त तपाईं शुरूमै सडकमा आउनुभयो । महामन्त्री भइसकेपछि पनि गगनको पहिचान बनेको त्यो जुझारुपन कायम रहला ?
म त्यो जुझारुपनलाई कहाँनेर प्रयोग गर्न चाहन्छु भने त्यो पार्टीलाई नै जुझारु बनाउने कुरामा प्रयोग गर्न चाहन्छु । हिजो मैले पाएको वैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा निश्चित भूमिका थियो, अब सिंगो पार्टीलाई नै जुझारु बनाउन चाहन्छु । थप के कुरा गर्न चाहन्छु भने म लामो समयदेखि समस्या उठाउने ठाउँमा बसेर काम गरें । समस्या देखाएँ । प्रश्न गरें । अब म बढी समस्या भन्दा पनि समाधान, प्रश्नभन्दा पनि उत्तर दिने गरी काम गर्न चाहन्छु ।
अहिले नै भनौं, नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा छ । सरकारले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा उठाउँदै आएको ठाउँमा सभापति एवं प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सिधा पहुँच हुने भयो । कुरा गर्न सक्ने भएँ । पहुँचलाई प्रयोग गरेर पार्टीले नै सरकारमा बस्दा जनताको पक्षमा सही काम गर्नुपर्छ । पहिला सही काम गर्न लगाउने अनि त्यही सही कामको प्रचार गर्न सकियो भने हामी भएको अर्थ हुन्छ । हाम्रो कर्तव्य पूरा हुन्छ । यस्तो गर्नुपर्थ्यो भन्ने हिजोको कुरा भयो । अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने र गर्न लगाउने ।
म मेरो भूमिकालाई शिफ्ट गर्न चाहन्छु, तर भूमिका घटाएर होइन । अब त समस्या देखाएर मात्र भएन नि, अब त डेलिभर गर्नुपर्‍यो नि ! मानिसहरूले यत्रो अपेक्षा गरेको छ, हामी हुनुको फरक मान्छेलाई दिन सक्नुपर्‍यो नि !
मेरो जुझारुपन नघटोस् भनेर म सचेत रहनै पर्छ । अबदेखि पार्टीको संस्थापन भयो भनेर तपाईंले गर्नुभएको शंका सही हो । विषयलाई ढाकछोप गर्नतर्फ, अल्मल्याउनतर्फ लाग्यो भने मेरा लागि पनि घातक हुन्छ र पार्टीका लागि पनि ।
देउवादेखि तपाईंको प्यानल सबैले आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बनाउने कुरालाई महाधिवेशनमा एजेन्डा बनाउनुभयो । आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउनका लागि के लिएर जानुहुन्छ ? के छ जनतालाई आकर्षित गर्ने बिकाउ एजेन्डा ?
नेपाली कांग्रेस पार्टीले हिजो के गर्‍यो भन्ने आधारमा अबको चुनाव लड्ने होइन । त्यो चुनाव लड्यो भने हामीसँग जति मतदाता थिए, त्यतिमै सीमित रहन्छ । यो डरको राजनीतिले पनि हामीसँग ३० प्रतिशत मत हुन्छ– हामी भएनौं भने कम्युनिस्टले खान्छ, तानाशाही जन्मिन्छ, हामी भएन भने प्रजातन्त्र गुम्छ भन्ने डरको राजनीति गर्ने होइन । अब भरको राजनीति गर्नुपर्छ । डर र भरको राजनीतिमा तात्विक रूपले फरक छ ।
मैले भन्दै आएको छु, १० देखि १५ लाख नयाँ मतदाता कांग्रेसले थप्नुपर्छ । त्यो बेला थपिन्छ, जस्तो २०४८ सालमा थियो । २०४८ सालमा म जस्तो मतदाता हुन नपाएको व्यक्ति किन झण्डा बोकेर हिँडेको थिएँ भने त्यतिबेला पार्टीप्रति भर थियो । यो पार्टीले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ भन्ने थियो ।
नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जिताउनुभयो भने पाँच वर्षभित्र हाम्रो शासन गर्ने तरिकाबाट, हामीसँग भएको तयारीबाट, प्रतिबद्धता र हामीसँग भएको क्षमताबाट हामी यति काम सम्पन्न गर्छौं र तपाईंको जीवनमा यो बदलाव ल्याउँछौँ भन्ने हामीसँग यो आधार छ, हामीले यो यो तयारी गरेका छौं, यसरी काम गर्छौं भन्नुपर्छ । यो एक वर्षमा यो काम पूरा गर्नुपर्नेछ, त्यो भएपछि मात्र हामीलाई मत दिने व्यक्तिलाई हामीलाई मत दिएन भने के हुन्छ भन्ने डर होइन, हामीलाई मत दियो भने के हुन्छ भन्ने भर हुन्छ ।
मैले भन्दै आएको छु, १० देखि १५ लाख नयाँ मतदाता कांग्रेसले थप्नुपर्छ । त्यो बेला थपिन्छ, जस्तो २०४८ सालमा थियो । २०४८ सालमा म जस्तो मतदाता हुन नपाएको व्यक्ति किन झण्डा बोकेर हिँडेको थिएँ भने त्यतिबेला पार्टीप्रति भर थियो । यो पार्टीले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ भन्ने थियो । त्यो अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने थियो ।
लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री बनेको व्यक्ति भविष्यमा तपाईंलाई कांग्रेसको सभापति बन्ने सम्भावना भएको नेताको रूपमा चित्रण गरिएको छ । तपाईंको लक्ष्य पार्टीको सभापति बन्ने हुन्छ कि देशको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री बन्ने ?
दुवै कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा म यसका लागि काम गर्छु भनेर मिसन बनाएर काम गर्दै गर्दिनँ । म यसमा क्लियर छु । म आजको दिनमा निस्काम कर्ममा विश्वास गर्ने भनेजस्तै हो । महामन्त्री छु, महामन्त्रीको काम गर्छु । मसँग गरिएका अपेक्षा पूरा गर्ने शत प्रतिशत प्रयास गर्छु । इमान्दारितापूर्वक त्यो काम गरिरहँदा जहाँ पुगिन्छ, पुगिन्छ ।
आफ्नो बारेमा यतिमात्र सोचेको छु, केही वर्षपछि जब सक्रिय राजनीतिबाट म विश्राम लिन्छु, त्यतिबेला म अहिले जस्तै नागरिक पंक्तिबाट माया गरिने, विश्वास गरिने नेता रहन सकूँ । जतिखेर मसँग कुनै शक्ति हुन्न, मसँग कुनै आशा हुन्न, त्यसपछि म न मन्त्री हुने, न प्रधानमन्त्री हुने, त्यो बेलामा पनि यसले हाम्रो जीवन सुधार्न केही गरेर आएको हो भनेर माया गर्दिने मान्छे होऊन्, मेरो भोक त्यतिमा मात्र छ ।
कसैले भन्छ भने त्यो भोक र लोभ मसँग छ । यो कुरालाई मैले बाँकी राख्छु । यो तत्वलाई मर्न दिन्न ।
अरू कुरा मैले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने हो । सांसद भएँ, सांसदको जिम्मेवारी पूरा गरें । मन्त्री भएँ, मन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गरें । अहिले महामन्त्री छु, महामन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्छु, फल जे आउँछ, आउँछ ।
कार्यकारी प्रमुख बन्ने जिम्मेवारी आयो भने पछि हट्नुहुन्न नि ?
अहिले महामन्त्री छु । महामन्त्रीसँग जोडिएको कर्तव्य पूरा गर्दै गर्दा यसले मलाई जहाँ पुर्‍याउँछ, त्यसलाई ग्रहण गर्दै त्यो अनुसार काम गर्दै जाने हो ।
मिसन चाहिँ यसपछि म पार्टी सभापति बन्ने कि, कार्यकारी प्रमुख बन्ने हो कि भन्ने भोक नराख्ने । त्यसको लालसा नराख्ने । एउटै लालसा राख्ने– लोकले मलाई माया गरोस् । म एक्लै सडकमा हिँड्दै गर्दा, दुईवटा मानिसले मसँग आएर बातचित गर्दा, मलाई मेरो विगतसँग कहीँ न कहीँ सन्तोष मानेर, मलाई माया गरेर, मलाई शुभेच्छा प्रकट गरोस्, त्यत्ति भए पुग्छ ।
‘१४ औं महाधिवेशनमा सम्झौता, १५ औं मा नेतृत्व भनेका थियौं, तयारी शुरू गरिसक्यौं’
कांग्रेसको महाधिवेशनको समीक्षा गर्नुपूर्व राजनीति र देशको अवस्थाबारे केही कुरा गरौं । मेरो देश प्राकृतिक रूपले धेरै नै सुन्दर देश छ । देश हाँक्ने व्यक्ति दूरदर्शी हुँदा अरबका मरुभूमि स्वर्ग बन्दो रहेछ । हिउँ नै ...
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन्, राजेश्वर ज्ञवाली । राजधानी शहर रहेको देशकै पुरानो महानगरको प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका ज्ञवालीले एक कुशल प्रशासकको परिचय बनाइसकेका छन् । देश ...
नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत हुन् । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राजदूत नियुक्त भएका आचार्य नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि फिर्ता बोलाइए । २०४६ सालमा बनेक...
वामपन्थी राजनीतिमा रुचि राख्नेका लागि लिलबहादुर थापा मगर (लीला थापा) नौलो नाम होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म अग्रस्थानमा खटिनेमध्ये एक थिए, लीला । त्यसअघि २०३७ सालमा भएको जन...
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन, यो कहाँबाट आयो– प्रचण्ड [अन्तर्वार्ता]
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीको कार्यदिशामा ठूलो परिवर्तन आउने बताएका छन् । २०६९ सालमा हेटौँडामा भएको महाधिवेशनले लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागू हुन&...
बद्रीबहादुर कार्की नेपालको संवैधानिक र कानूनी क्षेत्रमा एक परिचित नाम हो । लामो समय कानूनको अध्यापन र सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेका कार्की अहिले पनि सक्रिय छन् । कानूनी क्षेत्रमा फराकिलो पहिचानसहित विश...